Iwu nkwụghachi - SoNuker
Anyị na-enye ngwongwo ndị na-enweghị mgbagha. Dịka onye ahịa ị nwere ọrụ maka ịghọta nke a mgbe ịzụrụ ngwaahịa / ọrụ ọ bụla na saịtị anyị.
KPỌRỌ Nkwado AKA
99% nke nsogbu nwere ike iji email dị mfe dozie. Anyị na-arịọ ka i jiri aka anyị kpọrọ ibe anyị “Kpọtụrụ anyị”. Ngalaba Ọrụ Ndị Ahịa anyị ga-alaghachikwute gị n'ime 24-48 (nke na-erughị awa 24) iji nyochaa nchegbu gị, yana azịza ya.
AKWIGKWỌ MAKA ỌR. EGO
Mbupu nke ngwaahịa / ọrụ: n'ọnọdụ ụfọdụ usoro a na-eji nwayọ nwayọ, ọ na -ewe obere oge iji nyere gị iwu ịmechaa. N'okwu a, anyị na-akwado ịkpọtụrụ anyị maka enyemaka. A ga-edenye nkwenye maka inyefe ego na Ngalaba Ọrụ Ndị Ahịa na edere n'ime ụbọchị 7 site na idobe iwu ahụ.
A kọwapụtaghị ụdị ngwaahịa a: a ga-akọrịrị ụdị ndị a na Ngalaba Ọrụ Ndị Ahịa ha n'ime ụbọchị 7 site na ụbọchị ịzụta. Ekwesịrị inye ihe akaebe doro anya na-egosi na ngwaahịa / ọrụ ahụ azụrụghị ka akọwara na weebụsaịtị. A naghị asọpụrụ mkpesa nke dabere na atụmanya ụgha nke onye ahịa ahụ.
Ndị ahịa chọrọ ịkagbu nkwụghachi ụgwọ nke ngwaahịa / ọrụ ma ọ dị n'ime ụbọchị 7 nke ụgwọ ịkwụ ụgwọ ikpeazụ. Ọ bụrụ na a rịọro maka nkwụghachi ka ụbọchị 7 gasịrị, onye ahịa erughị eru, na ịkagbu ya ga-agwụzị ụgwọ ịgba ụgwọ ọ bụla. Onye ahịa ahụ nwere ike ịga n'ihu na-enweta ọrụ ahụ ruo mgbe ngwụsị ụgwọ ịgba ụgwọ ha, ma ọ bụ họrọ maka ịkwụsị ngwa ahịa / ọrụ ozugbo.
KWURU ANY S NA-EGO
Anyị na-ada n'azụ ngwaahịa anyị ma nwee obi ụtọ ịnapụta ọrụ kachasị mma na mmekọrịta mmadụ na ibe ya n'ịntanetị taa. Anyị nwere ike ọ bụghị mgbe niile na-enye a nkwụghachi, ma ọ bụrụ na n'ime 7 ụbọchị ị na-enweghị obi ụtọ na gị iji nanị Kpọtụrụ Anyị na anyị ga-ahụ a mkpebi gị nchegbu.